Famindrana fanalefahana ny fikarakarana fako ho an'ny fantsom-pifandraisana, mihena ny fako
Home / Applications / Induction Preheating / Preheating fampidirana
Sokajy: Induction Preheating Tags: induction pre-heat coating, induction fanatobatahana fiara, fomba fanodinana preheat, induction preheating machine, fitsaboana fitsaboana fampidiran-dra, fampidinana fametrahana induction, Preheating fusion, fampidirana ny fampidiran-drano, milina fampandroana preheating, PWHT
Induction preheating dia dingana izay ahafahan'ny fitaovana na ny fitaovana ampiasaina amin'ny alàlan'ny famindrana alohan'ny famindrana bebe kokoa. Ny anton'ny fiandrasana mialoha dia miovaova. Ao amin'ny indostrian'ny cable sy ny filalaovana, ny foitran'ny serba dia mafana mialoha ny fanindronana fisintonana. Vato vy dia alaina mialoha ny fanangonana sy ny zinc coating. Ny fanamafisana ny induction dia manalefaka ny metaly mialoha ny fatorana, ary manomana tavoahangy sy fantsona ho an'ny fiara. Ny vahaolana amin'ny alim-bolana dia manatsara ny fanamboarana ny fivoriambe.
DAWEI Rafitra fanadiovana dia tena mahomby, ka miteraka tahiry lehibe. Rehefa manadio ny bozaka vy sy ny tariby ary ny tady, dia ahafahana mampiady ny 0.95 tsy tapaka ny diode, ka manala ny vidin'ny fitaovana enti-miasa. Fotoana fohy ihany koa. Ary mifanandrify amin'ny endriny mahazatra dia midika fa ny bobongolo tokana dia afaka mitantana ny faritra famokarana betsaka. Ny rafitra fanomanana indostrialy dia mora sy mora ny miditra amin'ny famokarana orinasa efa misy.
Induction preheating dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny fiara, fiara, herinaratra, elektrotechnika, fotodrafitrasa ary ny orinasan-tsambo. Ny faritra lehibe ampiasaina dia manadio ny fiara. Ny seranan-tsambo MYDD amin'ny rivotra fanamorana ny induction fantsorehana dia ampiasaina any amin'ny sehatra offshore ho an'ny vorona boribory mialoha. Ny andiam-panamafisam-peo MYD ao amin'ny rivodoza dia matetika mirotsaka mankany amin'ny sehatra solika sy seranam-piaramanidina mba hanamboatra sy hikojakojana.
Ny rafitra fanamafisana ny indostrian'ny MYD no ampiasaina voalohany alaina dingana.